Dowladda Soomaaliya oo digniin ka soo saartay fatahaado iyo daadad hor leh – Hornafrik Media Network
Dowladda Soomaaliya oo digniin ka soo saartay fatahaado iyo daadad hor leh
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay digniin la xariirta fatahaado hor leh oo ka dhasha wabiyada dalka mara ee Shabeelle iyo Jubba oo hada qeybo ka mid ah goobaha ay maraan dalka ka saameeyey fatahaado saamayn ku yeeshay nololsha dad badan oo Soomaaliyeed.
War ka soo baxay wasaaradda gar-gaarka iyo maareynta musiibooyinka ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in roobab la saadaalinayo inay fatahaado dhaliyan ay ka da’i doonaan koonfurta dalka, gaar ahaan gobolada ay maraan labada wabi ee Jubba iyo Shabeelle.
Sidoo kale qoraalka ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in fatahaadahaasi ay dhici karaan labada maalin ee soo socoto, sidaa daradeedna loo baahan yahay in ay dadku muujiyaan feejignaan, kana fogaadaan deegaanada ku dhaw wabiyada.
Wasaaradda ayaa digniinteeda ku carabaawday in meelaha ugu daran ee laga yaabo in dadaadku ku dhuftaan ay ka mid yihiin degmooyinka Beledweyne, Baardheere, Doolow iyo qeybo ka mid ah gobolada Bay iyo Bakool oo intooda badan dhaca koonfurta Soomaaliya.
Halkaan ka akhriso Warqadda DIGNIINTA:
Dowladda Soomaaliya oo shaacisay xilliga ay iibineyso shatiyada shidaalka dalka